တစ်ဦးကအမျိုးအစားအလွှာကေ့စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Hengyi
pullet 12 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ် 16 ပတ်ကြာမှတက်ကြီးထွားလာပြီးနောက် cage.Its အားသာချက် layer အားသူတို့ကိုပို့ဆောင်တင်သောတစ်ဦးကအမျိုးအစား hens လှောင်အိမ်အလွှာလှောင်အိမ်ကြက်ဥကိုတင်သောကြက်သားပွုစုပြိုးထောဖြစ်ပါတယ်, ကြက်သားစွန့်ပစ်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ရောဂါကူးစက်မှုလျှော့ချဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, 98% အထိကြက်ဥထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်သည်။ သကျတမျး 15-20 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ assemble.Feeding လွယ်ကူစီမံခန့်ခွဲမှုမှ 1.Easy, အာကာသကယ်တင်ထိရောက်စွာကူးစက်ရောဂါတားဆီးစီယူနစ်ဧရိယာဝေး flating မွေးမြူရေးလမ်းထက်ကျော်လွန်ကြက်၏ရှင်သန်မှုနှုန်းကို 2.Number တိုးမြှင့်ပြုလုပ်နိုင် ...
ဆိပ်ကမ်း: Yantai သို့မဟုတ် Qingdao
တစ်ဦးက အမျိုးအစား hens တင်သော လှောင်အိမ်
အလွှာလှောင်အိမ် pullet 12 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ် 16 ပတ်ကြာမှတက်ကြီးထွားလာပြီးနောက် cage.Its layer အား၎င်းတို့ကိုသယ်ယူအားသာချက်ကြက်သားစွန့်ပစ်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ရောဂါ transmission.Life span လျှော့ချဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, 98% အထိကြက်ဥထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်သည်ကြက်ဥကိုတင်သောကြက်သားဖြစ်ပါတယ်ပွုစုပြိုးထောဖြစ်ပါတယ် 15 နှစ်ပေါင်း 20 ။
assemble.Feeding လွယ်ကူစီမံခန့်ခွဲမှုမှ 1.Easy, ထိရောက်စွာကူးစက်ရောဂါတားဆီး, အာကာသကယ်တင်ရှင်သန်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်
တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်ဧရိယာဝေး flating မွေးမြူရေးလမ်းထက်ကျော်လွန်ကြက် 2.Number, က 100% မှ 50% တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်
3. ကြက်သားချေး, ကြက်လုံးဝအထီးကျန်ဖြစ်ကြသည်ချေးတိုက်ရိုက်ချေးသန့်ရှင်းရေးခါးပတ်ဆင်းဖြစ်နိုင်သည်, အိမ်သူအိမ်သားဖုန်မှုန့်ကိုအလွန်လျှော့ချ, ကူးစက်မစင်မှတဆင့်ရောဂါလျော့နည်းအခွင့်အလမ်းအလွန်ကြက်၏သေဆုံးမှုကိုလျှော့ချ
4. စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနိမ့်ဆုံးပမာဏကိုကန့်သတ်ကြက်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, feed ကိုကယ်တင်
ပစ္စည်း : Q235 အမျိုးသားစံအနိမျ့ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်
နို့တိုက်ကျွေးရေး 1.Driving ။ စွမ်းအင်ချွေတာ, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ။
3.The အောက်ခြေအသားတင်ညင်ညင်သာသာနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ကြက်ဥလိပ်ကိုထုတ်သေချာစေရန်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော် Angle မှာ tilts ။ burrs မရှိဘဲအောက်ခြေအသားတင်ပူသွပ်ရည်စိမ်ချောမွေ့, ကြက်သားခြေကြက်ဥထိုးမည်မဟုတ်။
15-20 နှစ် 4.corrosion ခုခံ, ဝန်ဆောင်မှုဘဝတက်
feed ကိုကယ်ဖို့အကျိုးရှိသောအရာ 5.The အလျားလိုက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တံခါးကို INSERT, လုပ်ကိုင်ရန်အဆင်ပြေပြီးကြက်သားကို run ဖို့ပြန်လာမထားဘူး။
အလွှာအကွာ၏ 6.The အမြင့်တိုးလာသည်နှင့်အထိပ်အသားတင်လေဝင်လေထွက်, အလင်းရောင်နှင့်ကပ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တစ်ဦးချင်းစီအလွှာများအတွက်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းအင်နှင့်သယံဇာတများကိုကယ်ဖို့ 7.Centralized စီမံခန့်ခွဲမှု, , စွမ်းအင်ကယ်တင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများကိုပစ္စည်းအချိုးအစားကိုလျှော့ချဖို့အဆင့်မြင့်လေဝင်လေထွက်စနစ်, အလင်းရောင်စနစ်နှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားချမှတ်။
8.The ပေါ်ကိုခါးပတ်ကြက်သားမစင်ခြောက်သွေ့ granular ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချသည်, မစင်ကိုရှင်းလင်းဖို့မွေးစားနှင့်ကြက်သားမစင်၏ပြန်သုံးနှုန်းမှာမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းက Surface ကုသမှု :
ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်တောက်ပနှင့်ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်း Surface: 20-30g / m2
ဝန်ဆောင်မှုဘဝကို: 8-10 အနှစ်။ ဒီအမျိုးအစားကတော့ client များအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။
ဝန်ဆောင်မှုဘဝကို: 15 နှစ် - တောင်မှကောင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာကြာကြာအချိန်။
ရှန်ဒေါင်း Hengyi တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးစက် CO ။ , LTD မှ။ , Longkou, တောင်ဘက်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Yantai ၏အရှေ့, Qingdao သည့် Yantai ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်အတွက်တစ်ဦးလှပသောသမုဒ္ဒရာမွို့၌တည်ရှိသောအနောက်နိုင်ငံတွေ Longkou ဆိပ်ကမ်းကိုမြို့အနီးက, sea.it ဖြတ်ပြီးမြောက်ဘက် Dalian သုတေသနပေါင်းစပ်ထားတဲ့နည်းပညာစက်မှုဇုန်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်, ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် နှင့် promotion.It အလွန်အမင်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းထားတဲ့ဒီတော့အပေါ်သတ္တုထိုကဲ့သို့သောကြက်သားအိတ်များအဖြစ်ထုတ်ကုန်, ဝက်မွေးမြူပစ္စည်းကိရိယာများ, တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်စက်ယန္တရား, ချမ်းအေးသောလေထုသိုလှောင်မှုပိုက်ကွန်နှင့်ထုတ်လုပ်သည်။
တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အလို့ငှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံကထုတ်လုပ်အလိုအလျောက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ set ကိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်, လေဝင်လေထွက်စနစ်, သောက်သုံးရေစနစ်, နောက်ချေးစနစ်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့သော၏အလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်သဘောပေါက် ကြာရှည်ခံမှု။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအတွက်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်စက်တွေတဆယ် years.In ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးမားခြံ၏အသုံးပြုမှုကိုအာမခံနိုင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအမြဲရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအဖြစ်အရည်အသွေးပြည့် "၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်လိုက်နာကောင်းသော results.We အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်, ဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်ဂုဏ်သတင်း, စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု, စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု "
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအမြဲနှစ်ဦးစလုံးအသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ဖို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့်တံတားတည်ဆောက်ရန်သင်တို့အဘို့, သမာဓိနှင့်အတူ၎င်း၏တာဝန်အဖြစ်အထူးကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကြာပါသည်။ အမိန့်တိုင်ပင်ဖို့လာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ဖောက်သည်ကျနော်တို့ကျေနပ်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနှစ်သက်သောမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်စက်ယန္တရားတစ်ခုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ မနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု company.We ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်စက်ရုံစျေးနှုန်းရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအတွက်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် machinery.The တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်စက်တွေ၏ပြီးပြည့်စုံမျိုးစုံတဆယ်ငါးနှစ်၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝအာမခံနိုင်ရှိသည်။
နောက်တစ်ခု: H ကိုအမျိုးအစားအလွှာကေ့
ရောင်းရန် 10000 အလွှာကြက်မွေးမြူရေး Bird ကိုကေ့
Layers3အဆင့်ဘက်ထရီလှောင်အိမ်
ရောင်းရန်4အဆင့်အလွှာကြက်သားကေ့
ကြက်မွေးမြူ5အလွှာကြက်သားအလွှာကေ့
ရောင်းရန် High Quality4အဆင့်အလွှာကြက်သားကေ့
120 Birds ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကြက်သားကေ့ Layer
ဂါနာကြက်ခြံသည် layer ကြက်သားလှောင်အိမ်
ကင်ညာလယ်တွေသည် layer ကြက်မွေးမြူလှောင်အိမ်
နီပေါသွပ်ရည်စိမ်ထားသော Layer ကြက်သားလှောင်အိမ်
Layer / Hen / ဥကြက်သားသည်ကြက်မွေးမြူရေးကေ့
သံမဏိငှက် Layer ကေ့